ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က တ ည်းက ကွာရှင်းခဲ့တာ ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်လာတဲ့ မယ်လိုဒီ – XB Media Myanmar
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ မယ်လိုဒီနဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူတို့ရဲ့ကွာရှင်းပြတ်စဲမှုအေ ကြာင်း ကို ပရိသတ်တွေလည်း သိရှိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဒါ့အပြင် ကွာရှင်းပြတ်စဲမှုအပြီးမှာ ထပ်မံထွ က်ေ ပ်ါလာခဲ့တဲ့ သတင်းတွေကြောင့် မယ်လိုဒီကတော့ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတချို့ကို ကြုံနေရ တာ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ အခြေအနေအမှန်ကိုမသိတဲ့ ပရိသတ်တွေနဲ့ စိတ်ပူနေကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် မယ်လိုဒီကတော့ အတွင်းရေးတချို့ကို ထုတ်ဖော်ြေ ပာကြားခဲ့ပါတယ်။
“စိတ်ပူပင်နေကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို အသိပေးပါရစေရှင်… ကျွန်မအနေနဲ့ မတူညီမှုများစွာနဲ့ ညှိမရတဲ့အနေအထား အခြေအနေတွေကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက အမျိုးသားနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ ကြတာပါ..သားလေးနဲ့ မိဘများရဲ့မျက်နှာ၊ ထောက်ထားစရာတွေရှိတာကြောင့်သာ တရားဝင်မ ထုတ်မပြောခဲ့တာပါ. တစ်မိုးထဲအောက်၊ မိဘများနဲ့အတူ လွတ်လပ်စွာေ နထိုင်ခဲ့ကြတာ ကာလအေ တ်ာကြာပြီဆိုတာ ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေ သိကြပါတယ်…
သားလေးကိစ္စရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပွဲလမ်းတွေရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ် သူနဲ့ကျွန်မက သားလေးရဲ့မိဘအေ နနဲ့ရော၊ မိတ်ဆွေကောင်းအနေနဲ့ရော မိသားစုလို ပုံမှန်သွားလာတာလည်း ရှိခဲ့ကြပေမယ့်လည်း နှစ်ဦးစလုံးဟာ လွတ်လပ်သူ၊ အမှီအခိုကင်းသူအနေနဲ့ သီးခြားရပ်တည်ခဲ့ကြတာပါ. တရားဝင် လွတ်လပ်ကြသူတွေမို့လည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်၊
ကိုယ်ရေး ကိုယ် တာကိစ္စကအစ စွက်ဖက်မှုလည်း မလုပ်ကြပါဘူး..အနှောင်အဖွဲ့ကင်းတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြ တ်ချက်နဲ့ ကျွန်မရဲ့ ရပ်တည်မှုမှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဘယ်မိသားစုကိုမှ ထိခိုက်ေ စခြင်းလည်း မရှိခဲ့ တာတော့ သေချာပါတယ်.တရားဝင်လွတ်လပ်တဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ ပက်သက်မှုရှိခဲ့ရင်လည်း လွတ်လပ်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် လူမှုကျင့်ဝတ်ေ ဖာက်ဖျက်ခဲ့တာ မရှိ ပါဘူး..
လွတ်လပ်သူတွေအနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်သီးခြားရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်.. စိတ်ပူပေးကြတဲ့ ပရိ သတ် ကြီးကို နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောပြချင်တာလေးပါ။ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ သီးခြားလွတ် လ ပ်စွာရပ်တည်နေတဲ့ ကျွန်မအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်ပေးသူများရော၊ အထင်လွဲမှားနေသူများရော၊ အားလုံးပဲ အေးချမ်းကြပါစေ.. သက်ရှည်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာ လိုရာဆန္ဒပြည့်ကြပါစေရှင်” ဆိုပြီး ရေးသားမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ မယ်လိုဒီကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ တရားဝင်ကွာရှင်းခဲ့ပြီး ဖြစ်တာမို့ လွတ်လပ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ လူမှုကျင့် ဝတ်ဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုး မရှိကြောင်း စိတ်ပူနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက် ထုတ်ဖော်ပြောပြခဲ့တာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လှနျခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးက ထှကျပျေါလာခဲ့တဲ့ မယျလိုဒီနဲ့ ခငျပှနျးဖွဈသူတို့ရဲ့ကှာရှငျးပွတျစဲမှုအေ ကွာငျး ကို ပရိသတျတှလေညျး သိရှိပွီးဖွဈမှာပါ။ ဒါ့အပွငျ ကှာရှငျးပွတျစဲမှုအပွီးမှာ ထပျမံ ထှ ကျေ ပျါလာခဲ့တဲ့ သတငျးတှကွေောငျ့ မယျလိုဒီကတော့ ဝဖေနျတိုကျခိုကျ မှုတခြို့ကို ကွုံနရေ တာ လညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒီတဈခေါကျမှာတော့ အခွအေနအေမှနျကိုမသိတဲ့ ပရိ သတျတှနေဲ့ စိတျပူနကွေတဲ့ ပရိသတျတှအေတှကျ မယျလိုဒီကတော့ အတှငျးရေးတခြို့ကို ထုတျဖျေွာေ ပာကွားခဲ့ပါတယျ။
“စိတျပူပငျနကွေတဲ့ ပရိသတျကွီးကို အသိပေးပါရစရှေငျ… ကြှနျမအနနေဲ့ မတူညီမှုမြားစှာနဲ့ ညှိမရတဲ့အနအေထား အခွအေနတှေကွေောငျ့ လှနျခဲ့တဲ့နှဈကတညျးက အမြိုးသားနဲ့ လမျး ခှဲခဲ့ ကွတာပါ..သားလေးနဲ့ မိဘမြားရဲ့မကျြနှာ၊ ထောကျထားစရာတှရှေိတာကွောငျ့သာ တရား ဝငျမ ထုတျမပွောခဲ့တာပါ. တဈမိုးထဲအောကျ၊ မိဘမြားနဲ့အတူ လှတျလပျစှာေ နထိုငျခဲ့ ကွ တာ ကာလအေ တျာကွာပွီဆိုတာ ရငျးနှီးတဲ့မိတျဆှတှေေ သိကွပါတယျ…
သားလေးကိစ်စရှိတာပဲဖွဈဖွဈ၊ ပှဲလမျးတှရှေိခဲ့တာပဲဖွဈဖွဈ သူနဲ့ကြှနျမက သားလေး ရဲ့မိဘအေ နနဲ့ရော၊ မိတျဆှကေောငျးအနနေဲ့ရော မိသားစုလို ပုံမှနျသှားလာတာလညျး ရှိခဲ့ကွပမေယျ့လညျး နှဈဦးစလုံးဟာ လှတျလပျသူ၊ အမှီအခိုကငျးသူအနနေဲ့ သီးခွားရပျတ ညျခဲ့ကွတာပါ. တရားဝငျ လှတျလပျကွသူတှမေို့လညျး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ကိုယျ ပိုငျဆုံးဖွတျခကျြ၊
ကိုယျရေး ကိုယျ တာကိစ်စကအစ စှကျဖကျမှုလညျး မလုပျကွပါဘူး..အနှောငျအဖှဲ့ကငျးတဲ့ ကိုယျပိုငျဆုံးဖွ တျခကျြနဲ့ ကြှနျမရဲ့ ရပျတညျမှုမှာ ဘယျသူ့ကိုမှ ဘယျမိသားစုကိုမှ ထိ ခိုကျေ စခွငျးလညျး မရှိခဲ့ တာတော့ သခြောပါတယျ.တရားဝငျလှတျလပျတဲ့သူတဈ ယောကျ အနနေဲ့ တဈစုံတဈယောကျနဲ့ ပကျသကျမှုရှိခဲ့ရငျလညျး လှတျလပျသူတှဖွေဈတဲ့အတှကျ လူမှုကငျြ့ဝတျေ ဖာကျဖကျြခဲ့တာ မရှိ ပါဘူး..
လှတျလပျသူတှအေနနေဲ့ ကိုယျပိုငျသီးခွားရပျတညျနတောဖွဈပါတယျ.. စိတျပူပေးကွတဲ့ ပရိ သတျ ကွီးကို နောကျဆုံးအနနေဲ့ ပွောပွခငျြတာလေးပါ။ကိုယျပိုငျဆုံးဖွတျခကျြနဲ့ သီးခွားလှတျ လ ပျစှာရပျတညျနတေဲ့ ကြှနျမအတှကျ စိုးရိမျပူပနျပေးသူမြားရော၊ အထငျလှဲမှားနသေူမြား ရော၊ အားလုံးပဲ အေးခမျြးကွပါစေ.. သကျရှညျကနျြးမာ စိတျခမျြးသာ လိုရာဆန်ဒပွညျ့ကွပါ စရှေငျ” ဆိုပွီး ရေးသားမြှဝခေဲ့ပါတယျ။ ပရိသတျကွီးရေ မယျလိုဒီကတော့ လှနျခဲ့တဲ့နှဈက တညျးက ခငျပှနျးဖွဈသူနဲ့ တရားဝငျကှာရှငျးခဲ့ပွီး ဖွဈတာမို့ လှတျလပျသူတဈယောကျအ နနေဲ့ လူမှုကငျြ့ ဝတျဖောကျဖကျြခဲ့တာမြိုး မရှိကွောငျး စိတျပူနတေဲ့ပရိသတျကွီးအတှကျ ထုတျဖျောပွောပွခဲ့တာ ပဲ ဖွဈပါတယျ။
သားအဖတှပေါလို့ပွောစရာမလိုလောကျအောငျကို ရုပျခငျြးခြှတျစှပျတူ ကွပွီး အရမျးခြောကွတဲ့ ဟဲလေးတို့ သားအဖနှဈယောကျ